lundi, 24 février 2020 22:30
Coronavirus: Bilan Madagascar 23 février 2020
lundi, 24 février 2020 22:24
Coronavirus: Filaharam-be any Korea atsimo hividy sarom-bava
lundi, 24 février 2020 22:10
CRJS Toamasina: Navaozina ho azo hanaovana fampisehoana na hijerena sarimihetsika
Noraisin'ny SPAT Port Toamasina an-tànana ny fanavaozana ny CRJS (Centre Régional de la Jeunesse et des Sports), izay hita fa efa antitra.
Nasiana efitrano mahazaka olona 400 ity fotodrafitrasa ity taorian’ny fanavaozana natao, ary azo hanaovana fampisehoana na hijerena sarimihetsika.
« Palais des enfants pionniers » na « Lapan'ny Ankizy mpisava lalana » no niantsoana an’ity toerana ity tamin’ny Repoblika faharoa, fotodrafitrasa niarahana tamin-dry zareo Koreana Tavaratra ny fanorenana azy. Taty aoriana vao nomena anarana « Centre Régional de la Jeunesse et des Sports » na Foibem-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Volamena miisa 5, volafotsy 2 ary alimo 4 ; nandrombaka medaly 11 ireo solontena Malagasy nifaninana tamin’ny "Open International de La Réunion" teo amin’ny taranja judo natao tatsy amin'ny nosy rahavavy La Réunion.
Tsara ny vokatra.
lundi, 24 février 2020 20:38
Coronavirus: Firenena miisa 30 no voa, voatery nahemotra ny fivorian’ny Antenimieram-pirenena Sinoa
Tafakatra 2592 ny namoy ny ainy noho ny Coronavirus any Chine. Dimy ny maty any Italia, izay firenena Eoropeana voalohany ahitana olona betsaka matin’io Coronavirus io.
Nanapa-kevitra ny fanjakana any Chine, tamin’ity alatsinainy 24 febroary ity, fa ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fivoriana azon’ny besinimaro atrehina eo anivon’ny Antenimieram-pirenena Entim-bahoaka sinoa, raha tokony hisokatra amin’ny 5 martsa toy ny fanao isan-taona nanomboka tamin’ny 1985.
Namoaka fepetra ihany koa ny fanjakana sinoa, fa tsy azo atao ny mivarotra sy mihinana biby dia, « animaux sauvages », hisorohana ny fihanak’ity valanaretina ity.
lundi, 24 février 2020 18:24
Morondava: Dibo-drano ny faritra iva
Niakaran’ny rano ny tanàna sasany teto an-drenivohitry ny Faritra Menabe, vokatry ny fifanojoan’ny reniranon’i Kabatomena amin’ny fiakaran’ny ranomasina omaly hariva. Voakasik’izany ny Fokontany Ampasy, Tanambao, Ankisirasira Nord, Ankisirasira Sud, Andakabe Est sy Andakabe Ouest.
Efa nisy fihenany ny rano androany atoandro, saingy ahiana ny mbola hiverenan’io rano manondraka faritra iva io amin’ny fiakaran’ny ranomasina anio hariva.
lundi, 24 février 2020 18:22
Fandriana: Lehilahy iray tratra nanao diplaoma sandoka
Maniry mafy mba ho tafiditra mpiasam-panjakana, ka nanao ny tsy fanao. Diplaoma sandoka no namenoany ny antontan-taratasy ilaina.
Tra-tehana izany ary efa eo ampelantanan’ny mpitandro ny filaminana ny raharaha, manao ny famotorana ahitana ny tambazotra mifamatotra amin’izao hosoka izao.